DHAGAYSO:Wasiir kamid ah xukuumadda madaxweyne Denni oo afka furtay kadib markii Calanka Somaliland laga taagay deegaanka uu kasoo jeedo & Xiisad cusub oo…… – Puntlandtimes
DHAGAYSO:Wasiir kamid ah xukuumadda madaxweyne Denni oo afka furtay kadib markii Calanka Somaliland laga taagay deegaanka uu kasoo jeedo & Xiisad cusub oo……
March 17, 2019 Puntland PL
GAROWE(P-TIMES)- Wasiirka wasaaradda Duulista, Hawada iyo Garoomada Puntland Ilyaas Cismaan Luga toor ayaa markii ugu horaysay ka hadlay magaacisbta degmada Faliidh Yaale ee gobolka Sool oo madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) uu dhawaan u magaacabay degmo isla markaasna wareegto kasoo baxday xafiiskiisa lagu sheegay in Faliidh Yaale ay kusii shaqayn doonaan dhamaanba wasaaradaha, maamulka gobolka Sool iyo Kastanka gobolka Sool oo haatan yaala deegaankaasi.
Wasiir Luga toor ayaa sheegay in uusan maqlin haba yaraatii magaacista degmadani cusub, isagoona sidoo beeniyey in calanka maamulka Somaliland laga taagay degmada Boocame xili uu booqasho ku tagay deegaankaasi dhawaan isla markaasna meesha ka saaray kacdoono ka dhacay degmada Boocame, kadib xiisad ka dhalatay magacaabista Faliidh Yaale oo masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Boocame ay sheegeen in ay ku biiri doonaan Somaliland.
Mr. Luga toor ayaa sheegay in Boocame iyo deegaanada ku hareeraysan ay ka taliso Puntland, waxaana uu tusaale dhow u soo qaatay golle deegaan oo ka jira degmada Boocame.
Dhawaan ayey ahayd markii Axmed Karaash uu magacaabay deegaanka Faliidh Yaale ee gobolka Sool degmo, taas oo xiisad siyaasadeed ka dhex abuurtay siyaasiyiinta degmadooyinka Boocame iyo Faliidh Yaale, halka gudoomiye ku xigeenka degmada Boocame ee gobolka Sool magacaabista Faliidh Yaale uu ku micneeyey hab qabiil in Axmed Karaash uu u maray magacaabisteeda isla markaasna ay ku biiri doonaan Somaliland amaba gobolka Nugaal.
Xiisadaha u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ayaa sii xoogaysanayey mudooyinkii ugu dambeeyey, waxaana weli ciidamo ka tirsan Somaliland ay ku sugan yihiin qaybo kamid ah gobolka Sool halka deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ay la wareegeen maalmo ka hor.
Faroole iyo wiilashiisii ayaa si xeeladaysan ma kale Puntland xukunkii kula wareegay
Denni wadanka ma xukumo e Faroole Futoole iyo khaansiirada uu dhalay baa dalka boobay